Shiicada iyo Wahaabiyadda yaa Soomaali u daran?! – Bashiir M. Xersi
Shiicada iyo Wahaabiyadda yaa Soomaali u daran?!
Date: 3 Aug 2013Author: Bashiir M. Xersi 10 Comments
Dadku waa AB ama HABAR wadaag (BAH WADAAG) mar waa HADAL ama HAYB wadaag (HIDDE WADAAG), mar waa HAWL ama HAB wadaag (HINDISE WADAAG), mar waa AQOON ama AQOOL wadaag (ARAGTI WADAAG) mar waa DHIIG ama DHALMO wadaag (DHAQAN WADAAG) MUUQ iyo MUUQAAL wadaag(MIDAB WADAAG).
Si ka jilicsan haddaan u dhaho, Dadka dunidan dulsaaran waxaa lagu kala soocaa Af iyo Addin. Micnaha waxaa lagu kala saaraa dhawaq iyo dheeh. Haddaan si kale u dhaho, waxaa lagu kala duwaa dibna hadal iyo duud heeryo. Dabcan, deegaan dayran iyo dabeecad dadnimo ha daleel marin. Xeer beegti, xukun dhigan, xeyndaab xiran iyo xuduud xeeranna xaf ha uga gudbin.
Dhanka kale, dadku waxay wadaagaan DIIN iyo CAQIIDO ama MABDA’ iyo FEKER, labada hore, waxay ku daaban yihiin sida iska cadba IIMAAN EEBBE iyo RUMAYN ILAAH, keenaysa falidda wixii ADDUUN kaa horjoogsanaya DAMBI, AAKHIRANA kaana dhawraya CIQAAB iyo CADAAB. Waana midda aan qormada ku qaabin doono, anoon ku dheeraanayn.
Sidii Alshabaab (garabka hubaysan ee Wahaabiyadda) looga itaal roonaaday, ayaa waxaa soo baxaya khilaafyo xooggan oo u dhexeeya, heer ay iskhaarijin ka dhex billaabatay. Ha la yaabin, maxaa yeelay, Soomaalida ayaa hore u tiri: “LABADII LAQDABO KU HESHIISA, LILLAAHI AYEY KU DIRIRAAN!”
Sidii Xasan Daahir oo naf la caari ah uu isugu soo dhiibay Maamulka Ximan iyo Xeeb ee Gobollada Dhexe ee Soomaaliya, haddana, isagoo jujuuban uu Xamar joogo, ayaa waxaa soo baxaya farriimo dhiillo iyo xambaarsan dhaleecayn, oo ku wajahan dal iyo dad gaar ah, maxaa yeelay, maadaama ay iyaga ka dhex tolantay, dagaalka waa in dhan kale loo jeediyaa, waa istiraajiyad lagu hago dagaalka, [inta gacalkaa is gowrici lahaa, nacab kale ayaa gondaha loo galshaa (Dhoofinta Qalalaasaha)].
Maalmahan waxaa mareegaha Soomaalida ku soo badanaya warar, qoraallo iyo falanqayn ku aaddan arrin ku cusub dhagaha iyo maqalka Soomaalida. Gadaal waxaa ka riixaya dibna ka hurinaya raggii Soomaaliya ku soo halakeeyey DAGAALKII JIHAADKA (WAHAABIYA) iyo inta aan aragtida fog iyo fekerka toolmoon lahayn, ee marna CAADIFAD diimeeded ku raacaya, marna NACAYN aan jirin ku taageeraya, isu gaynse noqonaya ADDEECID INDHA LA’ iyo ARAGTI GAABAN.
Qolyaha tooshku ku shidan yahay waxaa la yiraa SHIICO, yaa shumaca ku ifiyey? Maxay uga dan leeyihiin? Horta aqriste, wararkan iyo qoraalladan ka hor, ma maqashay inay Soomaaliya joogaan SHIICO? Kaba muhimsane, maxaa kaaga baxay sheekadan la wado?.
Aqriste, weydiimaha inta ku quseeya aan kuu daaye, bal aan inta aad iga sugee warcelinteeda gudagalo. Inta aanan jawaabta kama dambaysta ah ku siin, waxaan doonayaa inaan war dheeraad ah ku siiyo, si aad xog-ogaal u noqoto. Sheekadan markii u horraysay waxay soo shaac baxday, ka dib markii ay Dawladda Muslinka ah ee Iiraan ay qayb ka noqotay dawladihii Gargaarka la garab istaagay Soomaaliya, xilligii ay abaaraha xun ku dhufteen sanadkii 2011.
Waxay cirka isku sii shareertay ka dib markii ay Dawladda Muslinka ah ee Iiraan Safaarad ka furatay Magaalada Muqdisho bishii may ee sanadkii 2012, Safiirkan oo magaciisa la yiraa Makel Hussein Givzad. Maalintaa wixii ka dambeeyey, waxaa billowda garaaca gurbaanka SHIICADA, oo ay mar kale hor boodayaan raggii Soomaaliya magaca diinta ku gumaaday, af ama addin mid uun.
Marka laga soo tago, wararka ay meraagahan qoraan, oo ay hagaan dad aan magacooda oo saxan qori karin, oo aan lahayn aragti ama aqoon ay wax ku kala tifatiraan ama ku kala haadiyaan, ee wixii la sheegaba qora, iyagoon is weydiin waxani Soomaalida Dhaqan, Hidde, Af ama Diin wax ma u dhibayaan? Illeen intaa haddaan la dhawrin waa dabargo’e.
Wararka Mareegahan ay daabici jireen waxaa sii xoojiyey, ka dib markii uu ku soo biiray Garoonka Shiicada lagu far fiiqayo Maxamed Cabdi “Umal” isagoo dhammaadki bishii Lixaad ee na dhaaftay MINABRKA uu colaadda Soomaaliya ka huriyo kaga digay wax uu ku sheegay “MAWJADAHA AFKAARTA SHIICADA!”.
Inta aanan falanqayn, horta Aqriste, ma taqaan Umal? Haddaad taqaan waaba taqaan, haddaadan aqoon, waa Xasan Daahir, oo aan QORI wadan, Xasanna waa Umal oo QORI sita. Si kale, Umal waa ninkii WARAABAHA XALAALEEYEY, qormadan bal isha mari:
Haddaad baratay Umal, aan dib ugu laabanno waxa uu sheegay, isagoo yiri: “…Shiicaa soo gashay oo ooddeedii wadata…!” Marka laga soo tago inta eray Carabi oo aan dadku wada garanayn ee ku jiray Khubaddiisa, ayaa isweydiinta mudani waxay tahay Shiicada uu Umal ka digayo iyo Wahaabiyadda uu Afhayeenka iyo gar wadeenka u yahay Soomaali yaa u daran?.
Inta aanan ka jawaabin, anoo waaqica tusaalooyin ka soo qaadan doona, oo ay wali qaar taagan yihiin, ma ogtahay in Soomaali hore iyo hadda wali u joogaan SHIICO Soomaali ah? Micnaha in dalka Soomaaliyeed ay deggan yihiin dad Soomaali ah oo aaminsan Madhabka SHIICIGA ah? Haddaadan ogayn, haddaba, ogoow, maxaa yeelay waa dad wax ku leh dalka iyo dhulka, ciidda iyo calanka, lehna SUNNIGA Soomaaliga ah xaqa uu leeyahay.
In kasta oo aysan tiro ahaan badnayn, haddana, jiritaankooda in la ogaado waa muhim, maxaa yeelay waxaa meesha ka baxaysa dacaayadda raqiista ah, ee ay fidinayaan kooxaha Wahaabiyaddu, illeen ninkii quruummo ka hor Masaajidda ku lahaa degaanno Soomaaliya ka tirsan, ma ahan inuu maanta ciriiri ku dareemo xiriir Diblomaasi ee dhex maray Soomaali iyo Iiraan ama warxuma tashiilnimada Wahaabiyadda.
Soomaalidan SHIICADA ah, waxay deggan yihiin, o xarumo diimeed ku leeyihiin degmooyinka Xamarweyne, Waabari iyo Shangaani. Inta aan ku jiray diyaarinta qormada, ayaan baaritaan kooban ku ogaaday magacyada Masaajidda ay leeyihiin, balse, aanan u soo bandhigayn sababo la xiriira inaysan bartilmaameed noqon. Maxa yeelay farriinta ah in lagu JIHAADI karo si dadban way u baxday, kaliya waxaa dhimman middii tooska loogu fulin lahaa. Haddaad maqasho SHIICO ayaa Soomaaliya lagu dilay cidda dishay waad garan kartaa baan filaa, kaba muhimsane, cidda dilkaa sabab u noqotay ama fartay waad garan kartaa baan filaa.
Midda biya kama dhibcaankaa ayaa ah, Soomaali waxaa hore uga jiray dariiqooyinka SUUFIYADA iyo SHIICADA, oo iyagaa ku xoog badnaa dalka gees ka gees. Sidii ay u burburtay dawladdii dhexe ee dalka, waxaa iyana ku baahay oo sidii Daran dab qabsaday oo kalay u fiday manjadkii iyo mabda’ii Wahaabiyadda, iyagoo ku soo duggaalay laba qodob oo aan kala dicin, oo si weyn Soomaali u saameeyey, raad xoogganna ku reebay, oo kala ah:
1- FAWDO: Maamul iyo maarayn la’aan, maadaama aan qaran iyo dawladi jirin.
2- SABOOLNIMO: Maadaama aan dawladi jirin, ilo dhaqaalo iyo hay’ado shaqana ay meesha ka bexeen.
Labadan qodob waxay Wahaabiyadda u fududaysay inay Soomaali ka noqdaan dhaqdhaqaaq xoog dhaqaale iyo ciidan ba leh. Waxaad fiirisaa inta ay xarummo waxbarasho, caafimaad iyo cibaado ku leeyihiin, sidoo kale, waxaad eegtaa dhibaatada ay u gaysatay Alshabaab (garabka hubaysan ee Wahaabiyadda) Soomaalida, taa ayaana kuu caddaynaysa sida uu yahay xaalka Wahaabiyadda ee Soomaaliya.
Taa ka sokow, Wahaabiyaddu waxay naga soo galeen dhanka Sucuudiga, oo uu horjoogay ninka loo yaqaan: Maxamed Cabdil Wahaab “WAHAABIYA” kooxaha aragtidaa qaadatay waxaa nagala jooga ITIXAAD, ICTISAAM, AL SALAFIYA , AL SHABAAB IKK. Haddaba weydiinta ayaa ah: haddii Wahaabiya loo oggol yahay inay Waddankan joogaan, maxaa keenaya in laga digo Shiico, oo ah dad dhaqan ahaan Soomaali uga asalsan Wahaabiyada?! Ma garan.
Afka laga yiraahdoo
Uurka aanan jirinoo
Dadka lagu ugaartoo
Ubad lagu gumaadoo
Aan loo arxamahayn
Aqisrte, horta dadka maxaa ka dhexeeya? Maxayse wadaagaan? Taa ma is weydiisay? Hadday haa tahay waa tee? Hadday maya tahay, haddaba, maankaaga dib ugu laabo, ee warcelin soo diyaarso. Aniguse waan aan kuu sii hormsho, oo waxay wadaagaan shan arrin oo kala ah:
1- Dhaqanka ama Hiddaha
Wixii intaa ka baxsan, ee aan ahayn BAH WADAAGTA aan sare ku xusay, ee leh, DHIIG iyo DHALMO inta aadan ku hungoobin iska fiiri, illese laga yaabee inaad ka helin qofkee.
Anigu Rumayntooda dan gaar ah kama lihi Shiico iyo Wahaabiya, ee Shiico waa ila nooleed (ka Soomaali ahan) waligeedna dhib iima gaysan, kuwanse 20 sano oo ay bug nagu soo galeen inta ay noo gaysteen waligeen isuma gaysan! Aaminnada dan weyn iigama xirna, oo qofka ayaa xor u ah, diintaana sheegtay, balse, ninka aan nololna oo ogglayn, isna dhimasho u diyaar ah, Caasho iyo Cillaamo hadduu rumaysan yahay maxay kugu soo kordhin, oon dhib ahayn?.
Anigu qof walba oo Soomaali waxa uu aminsan yahay waa soo dhaweynayaa (kala duwanaasho la’aan nololi ma jirto!), waase inuusan qofna ku qabsin, dadkana baahi uga faa’iidaysan, kana lahayn dan siyaasaded iyo borobagaando ajande qarsoon! Sidoo kale, SHIICO, QAADIYARA, AXMADIYA, SAALIXIYA, WAHABIYA iyo Madhab walba oo dalka iman doona, ama diimo kale quseeya waxaa iiga muhimsan, in dadkeenna wada noolaashada qaataan! Illeen kaa ayaa horumar lagu gaari karaaye!
Taa haddaad ila garatay, aan mid kale kuu raacsho, horta nimankan laga digayo ee Shiicada ah iyo Wahaabiyadda waxaa noo daran saacaddan la joogo iyo sanadihii la soo maray waa Wahaabiyadda. Maxaa yeelay, inta magaca diinta Wahaabiyaddu ku dishay haddii la garabdhigo inta Soomaali iska dishay intii ay jirtay waligeed kama dhiman.
Soomaaliyeey ninkii WARAABAHA waa XALAL yiri ayaa idiin joogaa ood wali SHEEKH u taqaannin, marka qof kale waxba ha u sheeginninee, waxaa idin ku habboon sidii Gorayadii oo kale inaad luqunta laaladisaan ama ciidda madaxa gashataan!
Midda kale, Mashruucan hadda ma billaaban, ee wuxuu soo shaac baxay berigii Abaaruhu ku dhuften dalka, oo wufuud Iiraan ay dalka talee, iygoo macaawino geeyey, hadda waxaa loo soo nooleeyey waa wafdi kale oo Xasan Sheekh la kulmay kaliya! Inta Xasan la kulanta kama duwanee, iyagu waa Shiica miyaa loo beegsanayaa (takoorayaa)? Waxaa oo dhan Wahaabiyadda ayaa wadda, ee inta caddaan la kulamaya maxay uga duwan yihin?.
Midda kale, ninkii noo gurmaday anagoo baahi la ildaran wax uunna noogu deeqay, maanta inaan ku colaadinno waxa uu aaminsan yahay ma naga mudan yahay? Waliba isagoo xayndaabka Muslinnimo nagula jira. Taa macnaheedu waxay tahay, ama GAAJO u DHIMO ama QARAXA iyo JIHAADKA (QAXARKA SHABAAB) u DHIMO! Si kale, mar walba waa HA NOOLAAN!
Taa marka lagu fiirsho Shiicadu wax dhib ah Soomaali uma soo waddo, illeen dhaqan ahaan waa is yaqaannaan, balse, waxan balaayo la hullaaban oo indha shareerka lah, sidee loola dhaqmaa? Kaba muhimane, kuwan indha sarcaadka la taagan maalin caddeey ee waliba aan lagu sirmayn, illeen Soomaali wali kama soo kabsan dahaarradii ay gaysteen Wahaabiyadduye, sidaa awgeed, waxaa habboon inaan dadka la kala fogayn, ee la isku dayo sidii la isugu dumi lahaa.
Dadkii waa afduubeen
Afti waa u diideen
Arag waa ka duubeen
Maqal waa ka awdeen
Addin waa ka laabeen
Urtii kaba ilaasheen
Aariyo ka dhawreen
Oodeey u jiideen
Ka xireen albaabkii
Asqey nagu abuureen.
Madhabka Shiiciga iyo kan Wahaabiyaddu maxay is dhaamaan? Midna ogoow Soomaali hore waa u lahayd Shiico, waxay dhuumaalaysi galeen markii Wahaabiyaddu dalka ku xoogaysatay, ee markii hore Masaajiddo ayey ku lahaayen!
Dadka qaar ayaa waxay qabaan in labaduba ayey kala yihiin FIRCOON iyo HAAMAAN, haddaa maxay kuu kala dhaamaan? Si kale, waa BANSIIN iyo GAAS, ee kee dab u ruun? Hubaal in Soomaaliyana ay u baahan tahay DABDAMIN! Oo aysan u baahnayn Bansiinka Sacuudiga ama Gaaska Iiraan, balse, haddii garsoor caddaalad ah wax lagu goynayo, anaga (Soomaali) Shiico waxay noo joogtay in ka badan quruummo, marka cadaalad ma tahay in lala simo Wahaabiya shalay soo gashay?.
Baqdinta la qabi karo, ee qof walba oo Soomaali xalaal ah bogga uga taagan ayaa ah, Shiicadii hore noola joogtay waxay ahaayeen kuwa dhexdhexaad ah (qunyar socod), maxaa yeelay, maanta erayga dhexdhexaad waa ka baxay meesha, Wahaabiya dhiigya cab ah iyo Shiica xagjirayaal ah ayaa dunida Muslinka ku loollamaya, taa oo keenaysa in laga digtoonaado inaan noqonno meel lagu hadramo, asaanba noo yarayne!
Eeg waxa ka socda dalka Lebanon, Sacuudi iyo Iiraan ayey u kala xiran tahay, qolo kastaba culeyskeeda ayey ku leedahay, hubaal in dawladahaani u baahan yihiin garoommo cusub oo ay rabaan in ay cayaartooda geeyaan, waana midda aan u lahaa, waa in aan foojignaan weyn muujinnaa, maadaama aan nahay dal wali burbursan, oo aan qof walba oo imaanaya aannan haye dhihin waxa uu wato.
Hore ayaa Jihaadkii dalalka Carabta iyo qaraxyadii ka socday Waqooyiga Afrika loogu soo raray Soomaaliya, haddana filo haddaan laga digtoonaan SHIICO iyo SUNNI dalka dhexdiisa isku baacsanaya, haddaan farriimaha qaar lagu celin faraha soo diray, dadkana la dhihin ka fogaada FIDNADA, waa dhib cusub oo inagu soo fool leh. Allaw aday ku leedahay.
Previous Previous post: Gabannada Gobolka GALGUDUUD oo u guntaday geddey GUURTIDU ka gaabsheen!
Next Next post: Soomaali weyneey: Samatar waa kaa!
10 thoughts on “Shiicada iyo Wahaabiyadda yaa Soomaali u daran?!”
17 Apr 2014 at 2:31 am
Qoraha qormadaan soo diyaariyey aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. runtii waa wax lagu farxo qof soomaali ah inuu sidaan wax u taxliilin karo, si walbaba ha ahaatee waxaa wanaagsan in dhexdhexaad la noqdo oo aan dhanna loo ciirin, shiico soomaaliya hadayna ka jirin oo dhaqdhaqaaq iyo saamayn ayan kulahayn waxay ka jiri jirtay adduunka dacaladiisa, sida waddamada carabta iyo kuwa kaleba, sunni iyo shiico waxay ahaayeen muslimiin mudda aan yarayn soo jiray.
Magaca shiico afsoomaaliga waa koox ama garab, magacaasi wuxuu baxay xilligii ay dagaalamayeen khaliifadii afraad ee muslimiinta imaamu cali binu abii daalib iyo kooxdii fallaagada ahayd ee khaliifka ka hortimid ee uu hoggaaminayey mucaawiye binu abiii sufyaan, garabkii khaliifka muslimiinta la socday oo la jiray ayaa lagu magacaabay shiicatu cali/garabkii cali, ilaa iyo xilligaas ilaa iyo iminkana waa ay jiraan shiico.. suni iyo shiicana waa soo jireen nabad gelyeyna ku wada noolaayeen, is-gawrgawrac iyo argagixiso ma jirin.. iminka waxa qalalaasaha adduunka muslimka ku dhex tuuray oo dhibta wada waa WAHAABIYADA.. soomaaliya ayay wahaabiyadu xasuuqday culimadii bay toogatay qubuurihii awliyada ayay soo qufeen, dhammaan dadka soomaaliyeed ee ay sidaas wahaabiyo u gelayso waa sunni ma ahan dad shiico ah.
Sidoo kale caalamka islaamka sunni iyo shiicaba wahaabiyadu dabkaas oo kalay ka shideen in wax la dilo oo wax la qarxiyo ma ahane talo kale ma leh wahaabiyo waxaadba mooddaa inay qabaan JUUDAAN DADKA DHIIGGIISA KU NOOL OO CABBA!! iminka xaaladda ka taagan dalka Syria, Lubnaan iyo Ciraaqna waa xaalad siyaasad ku timid iyo qadiyad xukun ee ma ahan dagaal ka dhexeeya sunniga iyo shiicada, sababto ah dalalkaas weligood suni iyo shiico way ku noolaayeen colaad iyo is xasuuqna kama jirin. iminka colaadda siyaasadeed ee ka taagan dalalkaas waxaa hogaaminaya oo hor boodaya waa laba dhinac; dhinac waa wahaabiyada oo ay taakulaynayaan boqorrada carabta iyo yuhuudda iyo maraykanka iyo galaada garabkooda ahba, dhinaca kalena waa madaxweynahaa Syria BASHAR AL ASAD oo ay taakulaynayaan dawladooda iiraan iyo xisbullaahi iyo dawlada kaleba sida ruushka iyo kuwa la midka ah, marka labada garab ee is hayaa oo America iyo Russia ay kala taageerayaan waa ay caddahay inayna diin isku hayn ee la isku hayo colaad siyaasadeed iyo xiisad taagan.
Hadalka waxaan uga baxayaa shiico waa mad-hab ka mid ah madaahibta islaamka sida maaliki iyo xanafi iyo shaafici iyo xanbaliba u jiro ayay shiicana u jirtaa o dhamaantood giraanta islaam bay kuwada jiraan weligoodna waa soo jireen shiico iyo sunni. ninka ka shiicada wax ka sheegay ee la yiraahdo shiikh UMAL wuxuu shiicda ceebta ugu yeelayaa oo uga digayaa wuxuu doonayaa inay wahaabiyadu sidaas waddanka ku haysato oo ayan imaan dalka wax ka fikir duwan oo ka qabta dulmiga wahaabiyadu dadka ku hayso, wuxuu umal doonayaa inaan la caddayn beenta iyo dulmiga wahaabiyadu wadaan, wuxuu doonayaa inay shacabka soomaaliyeed ay wahaabiyadu sii dhiig mirtaan khuraafaadkoodana ku sii daldalaan. Shiikh umal bay u yaqaannaan waana isaga ninkii WARAABAHA xalaaleeyey! waa isaga ninkii yiri nebiga scww ayaa QASHIN iyo INJIR lahaa!! umal waa ninkii yiri nebiga scww NAAG ISLAAMEED OO NIN KALE QABO AYAA MADIXIISA INJIRTA KA GURI JIRTAY!! wuxuu kaloo yiri nebiga scww ISTAAGGA AYUU KU KAADIN JIRAY!!!
Intaas iyo wax kale oo aan afkaygu qaban karin ayuu umal ku sheegay nebiga scww, ninkaas weeye ninka wahaabiyo matala, diinta wahaabiyaduna waa sidaas, umal soomaalidu sheikh bay u taqaan diin iyo khayr inuu barayo ayay u qabaan, markii uu nebiga scww sidaas u aflagaadaynayeyna waa ay dhagaysanayeen oo waa ay hoos fadhiyeen!! hal qof oo goobtaas joogay meeshii kama kicin oo kama gilgilan ceebta nebiga scww lagu sheegayey!! sidaas meeshuu kaga khudbaynayeyna Nairobi Kenya ayay ahayd, isla ayaamihii wax yar kaddibna soomaalidii joogtay Nairobi cara Allaa ku dhacday oo sida kenya u gashay waa la wada og yahay… marka soomaali in wahaabiyo lagu salladaa waa ay istaahilaan. SHIICO iyo dad ka wanaagsanna soomaali ma istaahilaan.
NABADGELYO IYO NAXARIIS NEBI MUXAMMAD KORKIISA HA AHAATO.
Dalmar Ciise says:
Anagoo ah shan wiil oo Somali ah. oo ku nool qaarad Yurub ayaa diinta shaki naga galay, markaan aragnay sida Wahaabigu u dhaqmo iyo dabacadooda ah runtii Muslim naceebka.
Hadda Axumdu Liilaahi, waxaan aragnay madhabada Shiicada in eyn aheyn waxa lugu sheegayo ey in badan la mid tahay tii Suufiyada ee nalaku dhalay. Ayena waxa kaliya oo Sucuudigu Cadaw ugu yahay iyo nimanka gararka dheer ee jeegaga lacagta ka qaataa ey tahay in Shiicadu ey jeceshahay Nabigeena SCW iyo Duriyadiisa. Walalayaal waxaan ogaanay in Wahabiyadu ey u qarsoon tahay naceebka Nabiga SCW iyo Ahlu Beytka.
Muslinkana ey dagaal xeelada sir ku hayaan sidey burburin lahayeen ee ogaada.
Markii ugu horeysay ee shiicada na soo jiidatay waa markii aan aragnay ayagoo qaadaya
Nabi amaan , mid la mid ah kii culamadeenii Somaliaya Islamisay Suufiyada.
Walaalayaal , hadaad doonaysaan in aad ka cood bileystaan Wahaabiyada, qaada heesta
Nabi amaanka. RABI SALI CALAL HABIIBI MAXAMED , WA AALIHII WA SAXBIHI ””””””””
Wahaabi kabihiisa ayaa qaadanayaa , oo carari. Shadaamada sidaa ku ceeriya.
Walalayaal maanta waxaan idinku bishaareynaa in Ilahey nugu soo celiyey diinteena macaan ee Shaydaanka Wahaabigu noo khaariyey.
7 Apr 2015 at 7:33 pm
Qoraaga Af Soomaliga siduu u yaqaan Alleylahe uma yaqaan Diinta Islaamka ah, hadey ahan laheyd taariikh ahaan ama qeybaheeda kala duwan. Kaaga darane asagaaba is radinaayaa oo qoraalkiisa qeybta dhexe iyo gunaanadka shaqo iskuma laha. Aan soo koobo markaan, hadaad ka mid tahay qolada aad sheegtay ee Shiicada ah oo aad tiri dhuumaaleysi ayey ku jiraan, ku bishaareyso waligiin waad ku jireysaan, maxaa yeelay Maqaal la qoro oo boor isku qaris ah Shiicada Islaam kuma noqoneyso. Maxamed bin Cabdulwahab Allaha u raxmadee hortiis kun sano yeey Muslimiinta ku nool Aasiya, Afrika iyo Yurubba la dagaalami jireen Af iyo Adinba. Maqaalkaga deel qaafka ahna kuma Islaamaayan. Hadii eey kaa tahay sidaad sheegatayba qolada cid walba oo u timaada soo dhaweysa, dee horaan kugu sheegay inaad Diinta Islaamka ah aad ka arradantahay aqoonteeda. Mabaadii’da diinteena waxaa ka mid ah in Samaanta la faro, Xumaantana la reebo, Shiico xumaanteeda wax ka weyn oo aan aqaano ma jiraan! Shiico wax ka sheegeeda kuma dheeraanaayo, maxaa yeelay dad badan oo iga aqoon badan aa horay iyo gadaal uga hadlay.
cabdalle isse says:
30 May 2015 at 11:54 pm
Qoraalkan wa mid funny ah xaqiiqdi.in wax la qora ma fududa oo waxan la diyaariyaa wa nin hdl kar ah allaha cadaabe haduu shiico yhy wahaabi iyo shiico waligood meel ma wada galan mid xigta somali ma maqal shiico ah 2011 ka hor mesha ku aragtay wa hooyada oo jiran ama aabaha oo laalush qaatay aa fila
wecelka qormadan qoray culumada inuu caayo wa wax ku ceeb ah nin qabqable ah iyo nin culumo ahna inu is barbar dhigo lama yaabayo asxaabti bay shiico inkaareen iyo.xaasaski nabiga CSW kaba sii darane adiga waxan aad raacsan thy ma carab ba mase faarisin doonaya inay diinta ka aargutan ilaahay caadilsana dadkan oo kale ayuu jaanis siiyay
20 Jun 2015 at 1:35 am
Runti waxa qoralka sameyay suugaanyahan afsomaliga yaqaan, hayeshee waxba maad sookordhin aan aheyn inaad tahey shiici ku dhaqmaya TUqya ama munaafaqnimo ama been. Waxana u daliil ah inaad adiguba sheegtay inaad qarineyso masajido shico leedahay somalida gudaheeda amaankoda awgeed. Wax laqariyaana diin iyo islaamtoona kuma jirto. Waxan kugula talin lahaa warkaaga cadee oo kabax madawga ilaahey s.w.t. Xaqa muu qarin.
Pingback: Loollanka aydoolajiyadaha iyo agoonta aragtida ka arradan! | Bashiir M. Xersi
Pingback: Bulsho farsamada iyo farxshaxanka ka fiigta! | Bashiir M. Xersi
Pingback: Bulsho farsamada iyo farxshaxanka ka fiigta! W/Q: Bashiir M. Xersi | Laashin Iyo Hal abuur
6 Sep 2015 at 6:25 am
Qofka waxaa wanaagsan marka uu ka hadlayo xisbi ama koox in uu aqoon u leeyahay. Waxaa nasiib daro ah qofka muslimka sheeganaya hadana maanta lataagan shiicado waa muslimiin waxana keeni karta aqoon la.aanta nahaysata waxan leeyahay qofka raba in uu dadka wax u kala cadeeyo marka hore waa in uu aqoon diimeed leeyahay hadii kale waxaa dhacaysa in ay timaado afkay qoyan